Mahavariana metro Stations tany ambanin'ny tany Art | Save A Train
Home > Travel Europe > Mahavariana metro Stations tany ambanin'ny tany Art
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 30/10/2019)
Underground Art amin'ny metro toby toa vaovao tranom-bakoka ny olona. Izy ireo dia tsy maintsy lasa ny vaovao-mahita toerana ny zavakanto sy ny famolavolana mpankafy. Iza moa no mba nieritreritra? Ny sasany manome aingam-panahy indrindra sehatra-bahoaka, fampidirana goavana zavakanto sy ny famolavolana dia hita ao amin'ny tanàn-dehibe maro 'Metro toby. Ary, Art Underground dia mitondra mihoatra noho ny nidaboka ny loko ho any amin'ny metro.
Subway Stations dia mahita ny fitomboan'ny ridership sy ny fizahan-tany. Ary noho izany, vokatr'izany, izy ireo nahita ny fitomboana tao ny fahatsapana ny fiaraha-monina.
Art in fitaterana mety hitarika koa any amin ny fihenan'ny amin'ny fomba maro hafa, toy ny: Entona mandatsa-dranomaso famoahana entona, fandrobàna, ary ny commuter fahasorenana! Ny soa toa tsy manam-pahataperana! Izay no antony faly izahay mba hizara ny tsara indrindra Picks ny Underground Art – Mahavariana metro stations.
Quality Fitaterana = Quality ny Fiainantsika
Araka ny mandalina ny atao amin'ny Frantsa ny Urban Development Institute. Paris lany tamin'ny salan'isa 23 andro isan-taona eo amin'ny fitaterana. Ary izao no tsy afa. Ny olona manerana izao tontolo izao fampiasana fitateram-bahoaka mba niraharaha hiasa.
Fantatrao ve: fa ny fanadihadiana dia nampiseho fa ny kalitaon'ny fitaterana mivantana ny hatsaran'ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny fitaterana mpampiasa? The traikefa ny Travel ny fitaterana dia tokony ho mahasarika fotsiny. "Zavakanto-bahoaka dia afaka manovo ny hoe iza ny toerana, manampy ny fahatakarana ny ara-tantara na ara-kolontsaina heviny ny mpiara-monina sy ny mponina ao. "
Tetikasa Art Underground dia afaka ho hita manerana an'izao tontolo izao. avy amin'ny sary sokitra, mosaics, sary hoso-doko. Ho lehibe kokoa toy ny fametrahana Ventures, soratra voasokitra, ary ny sary sokitra. Ireto misy ny Picks.
Underground Art – Mahavariana metro stations: Stockholm, Soeda
Dia tsy ho gaga ny sasany aminareo izay Soeda no voalohany ao amin'ny lisitra mba hijery ambanin'ny Art. Raha mijery ambanin'ny renivohitra soedoa, dia hahita ny be pitsiny tranonkala ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany andalana.
Betsaka kokoa noho ny 90 ny 100 stations ao amin'ny 110km tonelina rafitra. Izy ireo indraindray antsoina hoe "lava indrindra manerana izao tontolo izao moa Gallery". Izy ireo no voaravaka sary hoso-doko, fametrahana, mosaics, ary ny sary sokitra amin'ny 150 nanomboka tamin'ny taona 1950 mpanakanto.
Ireto misy sary avy amin'ny mahagaga Underground Art
Mahatsapa aingam-panahy hijery ireo mahagaga ambanin'ny sekely Art? Save A Train afaka mahazo anao any! Boky ny lamasinina tapakila amin'ny minitra ka tsy miafina sarany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funderground-art-subway-stations%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#ArtbyTrain #ArtinEurope #SubwayArt #UndergroundArt kanto tranom-bakoka metro